$10 Kun ayay ku siineysaa magaalada Tulsa haddii aad deggayso! | Radio Himilo
Home / Deegaan / $10 Kun ayay ku siineysaa magaalada Tulsa haddii aad deggayso!
$10 Kun ayay ku siineysaa magaalada Tulsa haddii aad deggayso!
Posted by: Ahmed Haaddi December 5, 2018
MagaaladaTulsa ee dalka Mareykanka ayaa billowday dadaal lagu dhiira-gelinayo inay dad badan u soo guuraan magaaladaasi oo dooneysa inay xoojiso fursadaha koriimada dhaqaalaha kaddib markii inta badan dadkii degganaa u dhaqaaqeen magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka.
Magaalada Tusla oo katirsan gobalka Oklahoma ayaa siineysa 10 kun oo doolar qofkii oggolaada inuu ku noolaado magaaladaasi muddo hal sano ah.
Sida wargeyska Washington Post uu ku waramayo, lacagtan oo kaash ah waxaa qofka looga caawinayaa kirada iyo kaalmooyin kale muddo sanad ah.
Maamulka magaalada ayaa rajeynaya inay arrintan dhiira-geliso dad badan oo ay ku jiraan kuwa hadda damaca uga jiro inay magaalada ka guuraan.
Magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka waxay bartilmaameed u noqdeen dadka doonaya dhaqaalaha iyo shaqooyinka wanaagsan, waana sababta magaalooyinka sida Tusla looga sii guurayo.
Hay’adda George Kaiser Family Foundation ayaa bixinaysa lacagta la siinayo qof kasta oo daneynaya inuu deegaansado magaaladaasi. Tan iyo markii xayeysiin loo sameeyay barnaamijkan, hay’adda George Kaiser waxay heshay codsiyo ka badan 6,000 oo qofood.
Agaasimaha fulinta hay’adda kharashka bixinaysa Keivan Leivet ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu qeyb ka yahay istiraatiijiyad ballaaran oo dhiira-gelin u ah in magaalada laga dhigo mid leh dhaqdhaqaaq iyo koriimo dhaqaale oo wanaagsan.
Tirakoobyo ayaa muujiyay in heerka shaqo la’aanta magaalada aysan dhaafsiisneyn 3% laakiin khubaro badan ayaa aaminsan inay jiraan sababo kale oo dhaqan-dhaqaale oo dadka ku riixaya inay ka haajiraan magaalada.
Waxaa xusid mudan inay jiraan magaalooyin kale oo Mareykanka ku yaala oo qaatay tallaabooyin lagu bixinayo lacago oo lagu xoojinayo inay dadka sii joogaan magaalada.
Previous: Macluumaad aadan ka ogeyn mataanaha!
Next: Hazard oo noqonaya Cayaaryahanka ugu mushaarka badan taariikhda Chelsea